ချစ်ကြည်အေး: ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်း လှမ်းကြသူများ
ကျွန်မတို့အားလုံး ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ လမ်းလျှောက်တတ်စကတည်းက ခုချိန်ထိ ခြေလှမ်းတွေ အများကြီး လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဘ၀မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ကွဲပြား၊ ရပ်တည်ချက်တွေ မတူကြတဲ့အခါ လျှောက်ဖြစ်ကြတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ အသီးသီးဟာလည်း တူကြမယ် မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။ အဲဒီလို ခြေလှမ်းတွေရဲ့ လားရာမတူတာနဲ့အမျှ ပန်းတိုင်တွေ ကွဲပြားသွားကြတာ အံ့သြစရာမဟုတ်ဘူးလို့ သဘာဝကျကျ လက်ခံထားမိပြန် ပါတယ်။
မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရား လေးပါးကို ကျွန်မတို့အားလုံး သိထားကြပါတယ်။ သိပေမဲ့လည်း လက်ကိုင်ကျင့်သုံးဖို့တော့ ခက်ကောင်းခက်နေပါလိမ့်ဦးမယ်။
ဒီလို ခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုမှ ရွေးချယ် လျှောက်လှမ်းနိူင်စွမ်းသူတွေကိုတော့ဖြင့် လေးစားအားကျလို့ မဆုံးတော့ ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ ချစ်ခင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ မင်းသား(ဦး)ကျော်သူ၊ သူ့ဇနီး(ဒေါ်)မြင့်မြင့်ခင်ဖေ ခေါ် ရွှေဇီးကွက်နဲ့ အဆိုတော် သီချင်းရေးသူ ဆရာဝန် (ကို)ဆောင်းဦးလှိုင်တို့ရဲ့ လူမှုရေးစွမ်းဆောင်မှုတွေကို ကြားသိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။ သူတို့တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေအကြောင်းကို ကျွန်မတို့နဲ့အတူ မျှဝေခံစားဖို့ သူတို့ သုံးယောက် စင်္ကာပူကို လာရောက်ကြပါတော့မယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
ညနေ ၃နာရီမှ ၈နာရီ
လက်မှတ်တွေကို ရနံ့သစ် B1-07 ၊ သပြေနု 02-55 - ပန်နီစူလာ ပလာဇာမှာ ၀ယ်ယူအားပေး နိူင်ကြပြီး လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေက ၂၀ နဲ့ ၂၅ ဒေါ်လာပါ။
ပွဲအကြောင်းအသေးစိတ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၈၁၆၁ ၂၂၄၄၊ ၉၈၀၀ ၄၁၁၈၊ ၉၁၈၆ ၉၁၄၀၊ ၉၁၀၁ ၆၄၆၄ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ သူတို့ သုံးယောက်နဲ့အတူ ဥက္ကာဦးသာရဲ့ သံစဉ်တေးသွားတွေကိုလည်း နားဆင် ကြရဦးမှာပါ။
ဒီပွဲမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဦးကျော်သူရဲ့….
-အနုပညာရှင်ဘ၀မှသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုပုံရိပ်များ (အမေး အဖြေ)
ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ ခေါ် ရွှေဇီးကွက်ရဲ့….
-လူသားအကျိုး၊ လူသားဝါဒ၊ အရပ်သားလူ့အဖွဲ့အစည်း
-နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ အနာဂတ်
-၈၈နောက်ပိုင်း ဂီတသမားတစ်ယောက်၏ ဂီတ၊ လူမှုကွန်ယက်၊ နိူင်ငံ့အရေး
ပြီးတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ Group Song ဖြစ်တဲ့ "ခွဲမရတဲ့ တွဲလက်များ"ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သံပြိုင် သီဆိုကြပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအားလုံးကို ဒီပွဲလေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ရင်း ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းတွေ အတူလှမ်းကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်…။
Cameron Mon Jun 18, 01:16:00 PM GMT+8
လူတွေအားလုံး မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရား လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...။
အမ်တီအန် Wed Jun 20, 07:01:00 PM GMT+8
ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်တော့ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကျေနပ်ရမှာ...။
Unknown Fri Jun 22, 01:00:00 PM GMT+8
အားလုံး မေတ္တာ ထားနိုင်ကြပါစေ...
နေရာ၊ ဧည့်သည်များနှင့် ဧည့်ဝတ်
A Burmese’s request to all Medias : “Stop Pushing ...
ကြုံရာဆုံရာ မင်းအကြောင်း "လူစီ"